WE ALL NEED TO BE UNITED asaMuslim Group in Myanmar whether they recognize or not. we should not use our Indian-Myanmar Muslims and Rohingya friends as sacrificial lambs to get political mileage and full recognition as Ethnic Race of Myanmar | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeWE ALL NEED TO BE UNITED asaMuslim Group in Myanmar whether they recognize or not. we should not use our Indian-Myanmar Muslims and Rohingya friends as sacrificial lambs to get political mileage and full recognition as Ethnic Race of Myanmar
ကျနော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ
တန်းတူ ညီမျှခွင့်ကိုပြောတာ….
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ
အဖိနှိပ် အချု ပ်ချယ် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံနေရပေမဲ့
ဘယ်တုန်းကမှ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ဒုတိယတန်းနိုင်ငံသား…လို့
မသတ်မှတ်ခဲ့ဘူး ဘူး မထင်ခဲ့ဘူး မခံယူခဲ့ဘူးပါဘူး
ငါတို့ဟာ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုအကြောင်းပြု ပြီး
မတရားသဖြင့် ခွဲခြား ဖိနှိပ်ခံနေရတယ် လို့ဘဲ ခံယူတယ်
တနေ့နေ့ တချိန် ချိန်မှာ မတရားမှုတွေ ကွယ်ပျောက်ပြီး
ခွင့်တူညီမျှတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဖြစ်ထွန်း
လာလိမ့်မယ်….ဆိုတဲ့ ခံယူချက် မျှော်လင့်ချက် အမြဲ ထား
နိုင်ငံရေးဖက်မှာ ဘာနေရာမှ မျှော်မှန်းမထားတဲ့အတွက်
လူကြို က်များအောင်လုပ်စရာမလိုသလို
လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်နေသူ(ရန်သူ) တွေနဲ့
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ ဘဝတူ အချင်း ချင်း
ဘယ်သူ့ကိုမှ ချမနင်းဘူး
ဒီအခ.ျိ န်မှာ ကျတော်တို့ အတွက် လူနည်းစုတွေအတွက်
တန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးကို ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ရဖို့ဘဲ
မျှော်မှန်းတယ်
အဲ့ဒီ မျှော်မှန်းချက်မျိုးမထားဘဲ
ရန်သူရဲ့(လက်ရှိ) အားသာနေတဲ့အချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး
အလျှော့ပေး အရှုံးပေးဖို့ လိုက်စည်းရုံးပြီး
ရန်သူ့ထံ ထိုးကျွေးဖို့ လုပ်နေသူတွေကို
ကျနော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြု နိုင်ဘူး
နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်ထားတာကို အပြစ်မပြောလိုဘူး
မျှော်မှန်းချက် ထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
(သူ ဝါသနာ ပါတာကိုး)
ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ နယ်ပယ်မှာဘဲ လှုတ်ရှားစေချင်တယ်
ဘာသာရေးထဲမှာ နိုင်ငံရေးပုံစံ ကလဖန်တွေ မျိုးစုံထိုးပြီး
နိုင်ငံရေး ရာထူးမျှော်မှန်းတဲ့အလုပ်တော့
မလုပ်စေချင်ဘူး
ဒီခေတ် ဒီအချိ န် ဒီအခါ ဒီကာလမှာ
ဟိုဒိုင်ဘီယာ စာချု ပ်လို
တဖက်သပ် အလျှော့ပေးတဲ့ စာချု ပ်လိုမျိုး
ဘယ်သူ့ မှာမှ ချု ပ်ခွင့် မရှိဘူး
မှန်ကန်မှုအပေါ် မရပ်တည်ရဲရင် ထိုင်နေလိုက်ပါ
အလ္လာဟ်သာသနာ အလ္လာဟ့်ဘန်ဒါ အလ္လာဟ်အရှင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်
← The majority has the right to rule but they need to protect the rights of the minority. If not, it could not be calledademocracy by the MOBOCRACY
21st. Century Myanmar-Narzi Concentration Camps ၂၁ ရာစု ခေတ်၊ မြန်မာပြည်မှ နာဇီ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းရေး စခန်းများ →
2 thoughts on “WE ALL NEED TO BE UNITED asaMuslim Group in Myanmar whether they recognize or not. we should not use our Indian-Myanmar Muslims and Rohingya friends as sacrificial lambs to get political mileage and full recognition as Ethnic Race of Myanmar”
Not only Panthays, Kamans, Pashus, Myae Doo but NO Christian and Buddhist Minorities are are getting EQUAL RIGHTS as Bama Buddhists. So it is nonsense to push for Pathi and urging Muslims to eat pork, if necessary, to be recognized as Ethnic Minority of Myanmar.
ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်က…….
ဒီမိုကရေစီ စံချိ န်စံညွှန်းတွေနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်
အဲ့ဒီ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်ချု ပ်မဲ့ အရပ်သားအစိုးရ ပေါ်ထွန်းလာရေး
လူမျိုးတမျိုးအမည်ခံယူရေး….ဆိုတာ အလုပ်ကို မဟုတ်ဘူး….
မွတ်စလင်တွေ…”ပသီလူမျိုး” အဖြစ်ခံယူရေး ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်…ကို
မဟုတ်ဘူး….(ဒီအလုပ်က သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တုန်းက အလုပ်…အခု….ပြီးသွားပြီ…..ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး………)
အဲ့ဒီလိုအချိ န်အခါမှာ…….တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တမျိုးအမည်ဖြစ်တဲ့
“ပသီလူမျိုး” ခံယူရေး ဆိုတာကို အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီး လုပ်ပြနေတာဟာ
” မယောင်ရာ ဆီလူး….ကြောင်မသာမှာ…ကြည်နူးတဲ့အလုပ်” ပါဘဲ….
ဒီအချိ န်မှာ အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်က…….
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ဖြတ်ရေး……ဘဲ ဖြစ်တယ်….
စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်ရမယ်…….
စစ်အာဏာရှင်ကို အကာအကွယ်ပေးနေသူတွေကို တိုက်ခိုက် ဖယ်ရှားပစ်
နိုင်ငံတကာ စံချိ န်စံညွှန်းနဲ့အညီ…အရည်အချင်းပြည့်မှီသူတိုင်း နိုင်ငံသား
နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိခံစားရမယ်……
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိမယ်….
နောက်ထပ်…ဘာများလိုသေးလဲဗျာ….
မယောင်ရာဆီလူး…..ကြောင်မသာမှာ ကြည်နူး…မနေကြပါနဲ့ဗျာ…..
မညီ မညွတ်ဖြစ်နေတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု…..နောက်ထပ် အစိတ်စိတ် အမွှာ
မွှာ ဖြစ်သွားအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့…..